> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan iPhone Xiriirada in vCard
Sida qaab caadi ah file u elektaroonig ah kaararka ganacsiga, vCard waa kuwo faa'iido leh. Haddii aad ku wareejiso xiriirada iPhone in vCard, waxaad si fudud u gali kartaa file vCard in aad mail Gmail, Outlook, Yahoo iyo in ka sii badan. Maalin maalmaha ka mid, haddii aad ka heli iPhone cusub, ama haddii aad lumiso xiriirada by kac ahayn, waxaad si deg deg ah dib iyaga ka heli kartaa adigoo soo degida files vCard in aad iPhone. Haddii aad raadineyso weeyna siyaabo in aad nuqulka xiriir iPhone in VCF, waxaad u timid inaad meel sax ah. Halkan, waxaan idin la wadaagi doona laba siyaabood oo ay ku dhameystiraan hawshan.
Qeybta 1: Dhoofinta iPhone xiriirada si fudud loo VCF
Qeybta 2: Saxiixa xiriirada iPhone in vCard si toos ah aad iPhoned
Qaybta 1. dhoofinta iPhone xiriirada si fudud loo VCF
Si aad u dhoofiyaan xiriirada ka iPhone in VCF, waxaad u baahan tahay qalab dhinac saddexaad - TunesGo Wondershare . Barnaamijkan boosaska badan aad ku xoojiya sidii ay u dhoofiyaan diyaariyeen ah ee xiriirka la galay files vCard in talaabooyin fudud. Hadda riix badhanka hoose si aad u soo bixi barnaamijkan on your computer
Ka dib markii ay soo degsado barnaamijkan, waa in aad la rakibi iyo waxa maamula. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone la your computer. Markaas, barnaamijkan lagu ogaan doonaa iPhone goobtii. Ka dib markii in, aad iPhone la soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Nuqul iPhone xiriirada si vCard
Tiirka bidix, guji "Xiriirada". Marka dhan xiriirada waxaa lagu soo bandhigaa dhinaca midig, doortaan xiriirada aad doonayay. Markaas riix "Dhoofinta in". In ay liiska hoos-hoos, doortaan "Dhoofinta xiriir la doortay si ay u computer" haddii aad dooneyso inay u dhoofiyaan qaar ka mid ah. Haddii aad doonayso in aad dhoofin oo dhan, guji "dhoofiyo oo dhan xiriirada in computer". In liiska jiido-hoos, guji "file vCard".
Markaas, suuqa kala file browser kacdo. Raadi meel on your computer si loo badbaadiyo faylka vCard dhoofiyo. Ka dib markii in, barnaamijka wuxuu biloowdaa dhoofinta file vCard ah. Maxay waa in aad lacag bixisid si aad fiiro waa in aad iPhone ku xiran inta ay socoto dhoofinta ah. Waa hagaag, in ay tahay! Tallaabooyinka waa fudud, sow kuma?
Qaybta 2. Transfer xiriirada iPhone in vCard si toos ah aad iPhone
Si ka iPhone wareejiyo xiriirada si vCard, waxaad u samayn kartaa sidan. Daar aad iPhone. Tubada "Xiriirada". Hoos taxanaha xiriirka si aad u hesho la xiriir aad rabto inaad ka dhoofin. Riix xiriirka doonayo. Markaas, faahfaahinta ay la soo bandhigi doonaa. Guji "Share Contact" ka dibna riix "Email". Markaas, buuxi cinwaanka emailkaaga, sida Gmail. Markaasaa waxaa u soo diro. Ka dib markii in, waxaad ka gali kartaa in aad xisaabta Gmail iyo dhoofin file vCard ah in aad damisid.
Laba siyaabood ayaa laga heli karaa. Laakiin kan labaad waa adag yara. Waxa kaliya ee ha kuu soo gudbin mid xiriir waqti. Ka sokow, waxa ay kaa caawin karaan oo kaliya in aad wareejiso file vCard in aad Email, ma aad PC. Taas lidkeeda, mid ka mid ah hore ha kartaa in aad wareejiso oo dhan xiriirada si file vCard waqti. Oo badbaadin file vCard on your computer. Hadaba, waxa ay dhab ahaantii ku haboon.